Iindaba - iTianjin Wangtong Industry and Trade Co., Ltd.
Tianjin Wangtong Industry Kwaye Trade Co., Ltd.
Tianjin Wangtong Industry And Trade Co., Ltd. Lifen Cosmetics Factory yayakhiwe ngo-1998, babe namava iminyaka engaphezu kwama-20 ekuveliseni izithambiso, senza iimveliso OEM / ODM kwaye zethu brand SIMU kwindawo zolusu.
Ukuze kusonjululwe abathengisi abaninzi abancinci abafuna ukugcina iindleko kwaye baneemveliso ezilungileyo kunye neephakeji ezilungileyo ngaxeshanye, i-MOQ ephantsi kakhulu iceliwe kuhlobo ngalunye lweemveliso ezinelebheli yabucala. Ngokwesiqhelo zilikhulu kuphela iiPC. Sincede abathengisi abaninzi abancinci ukuba bakhule ukusuka kwincinci ukuya enkulu. Nokuba ungumthengisi omkhulu okanye umthengisi omncinci, sikunika iimveliso ezisemgangathweni ophezulu kakhulu kuwe.
Senze umgca ococekileyo kunye wendalo weemveliso. Siyakholelwa ukuba ubuhle kunye nobulumko bendalo bunokubonelela ngeemveliso ezikwenza ukuba ubonakale kwaye uzive umhle- oku kuthetha ukuba siyala ukusebenzisa naziphi na izongezo eziyityhefu kunye neziselo ezinxilisayo zolusu ukwenza inzuzo yethu iphezulu ngexabiso lolusu lwakho oluhle.
Endaweni yoko, sizoba izakha-mzimba ezakhayo nezintle ezonyusa izityalo ezivela kwindalo ephilayo. Emva koko sidibanisa ezi zinto zikhutshiweyo kwialoe vera, ibhotolo ye-shea, kunye neoyile ethambisa nzulu ukwenza umgangatho wethu ophezulu, iimveliso zokhathalelo lolusu lwendalo.
Unokuqiniseka ukuba sonke isithako esisisebenzisayo sithathwa ngokufanelekileyo kwaye sikhethwe ngokucinga ngoncedo lwaso kulusu. Le mixube inzima iyondla, ihambisa amanzi, iyacoca kwaye inika amandla ukubonakala. Enye yeemfihlo zokwenza ukuba iimveliso zethu zisebenze ngempumelelo yinkqubo yethu yenyanga-ende, enobushushu obusezantsi. Oku kudala izicatshulwa zemithi eziqulathe isixa esikhulu seevithamini kunye nezondlo, ezenza iimveliso zethu zisebenze kakhulu. Le nkqubo yendalo ikwenza ukuba iimveliso zethu zikhuseleke ukuze zisetyenziswe ngumntu wonke, ukusuka ebantwaneni ukuya kwabafazi abakhulelweyo.
Okukhona usondla ulusu lwakho ngomgca wethu, kuya kuba sempilweni ngakumbi kwaye kuya kuba mhle ngakumbi. Abathengi bethu babone ukuphucuka okumangalisayo kunye nokuhlaziywa kobume babo ngenxa yeefomula zethu zokutya, zokulinganisa ulusu. Sijonga iifomula zethu ukuba zingaphezulu kokukhathalela ulusu kuphela. Baphatha amavumba atyebileyo kunye nokuhombisa okubonelela ngamava obutofotofo.
Ixesha Post: Apr-14-2021